Yikuphi engingakhetha kukho lapho ngikhansela ukubhukha kwendawo yokuhlala ngenxa ye-coronavirus (COVID-19)? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Indlela engcono kakhulu yokuthola okwengeziwe ngokukhansela kwakho kanye nezindlela zokubhukha ongakhetha kuzo, wukuqalisa inqubo yokukhansela ekubhukheni kwakho. Uma usuyiqalile le nqubo, uzoboniswa ongakhetha kukho okusekelwe ekutheni ukubhukha kwakho kuhlanganisiwe yini ngokuzenzakalelayo noma cha emthethweni wethu wezimo ezingalindelekile. Kuye ngemininingwane yakho yokubhukha, ungase ukwazi ukukhetha ukucela ukukhansela kumbungazi wakho futhi ubuyiselwe imali ephelele ungazange umthumele umyalezo ngokuqondile.
Uma ukubhukha kwakho kungafaneleki ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ungahlola ukubhukha kwakho ukuze uthole ukuthi kunazo yini izindlela zokukhansela ezishintshashintshayo nezimo ongakhetha kuzo. Uma kwenzeka, ungasebenzisa ushintsho oluvamile noma ukhansele ukukhetha okutholakalayo.
Kuye ngemininingwane yakho yokubhukha, ungakwazi ukucela ukukhansela kumbungazi wakho ngokuqondile uphinde ubuyiselwe imali ephelele. Uzothola ukuthi ungakwazi yini ukukhetha le ndlela uma usuqale inqubo yokukhansela.
Iya kokuthi Uhambo bese uthola uhambo ofuna ukulukhansela
Chofoza noma uthephe okuthi Veza imininingwane yohambo
Chofoza noma uthephe okuthi Veza imininingwane
Chofoza noma uthephe Shintsha noma ukhansele
Ngaphansi okuthi Khansela ukubhukha, chofoza noma uthephe Okulandelayo
Khetha isizathu se-COVID-19 (coronavirus) sokuthi kungani ukhansela
Chofoza noma uthephe okuthi Cela ukubuyiselwa kwemali okugcwele
Umbungazi uzonikezwa amahora angu-48 ukuba aphendule, noma amahora angu-24 uma ukubhukha kuqala kungakapheli isonto. Uma evumelana nokukhansela, sizothumela imali ebuyiselwayo ngendlela yakho yokukhokha yasekuqaleni, kuhlanganise nenani lesevisi. Thola okwengeziwe ngendlela ukubuyisela imali okusebenza ngayo.
Uma umbungazi engavumi, usengakwazi ukukhansela futhi imali oyibuyiselwayo izonqunywa yipholisi ejwayelekile yokukhansela yombungazi.
Uma ukubhukha kwakho kungawufanelekeli umthetho wezimo ezingalindelekile noma umbungazi wakho engavumi ukukhansela, ongakwenza ukuthumela umbungazi wakho umyalezo wokuthola ukuthi uzimisele yini ukukubuyisela imali enkulu nakakhulu Ngesikhungo Sezixazululo.
Uma isivakashi sicela ukukhansela, uzothola i-imeyili ekubuza ukuthi uyavumelana yini nokubuyisela imali ephelele. Uma isikhathi sokungena siphakathi nezinsuku ezingu-7, uzoba namahora angu-24 okuphendula, ngaphandle kwalokho uzoba namahora angu-48 okuphendula. Ukuze uphendule isicelo:
Kuyo leyo imeyili, chofoza noma uthephe okuthi Phendula isivakashi futhi uzoyiswa ku-Airbnb
Chofoza okuthi Buyisela imali ephelele noma okuthi Ungakwamukeli ukubuyisela imali
Uma uvuma ukubuyisela imali ephelele, ngeke sithinteke isimo sakho Sombungazi ovelele.
Uma ufuna ukukhansela ukubhukha ngenxa ye-COVID-19 kodwa kube kungafaneleki ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, usengakhansela ukubhukha, nakuba kungaba nezijeziso.